33RD: Difaaca Random waa difaaca munaaradda guddiga sixirrada | Androidsis
33RD: Random Defense waa difaac munaarad ah oo ay la socdaan kuwo kale oo badan inay adeegsanayaan guddigaas oo leh dhowr jibbaarane oo cutubkeenna la dhigay, ama maxay noqon laheyd isdifaacyada difaaca ee ciyaaraha kale.
Farqiga ugu weyn ee cinwaankan cusub ee 'Android' ayaa ah kala sooc la'aanta goobta cutubka in aan dhalinayno, maadaama aanan awoodin inaanu gacanta dhigno; Ilaa aynaan isku milmin laba nooc oo isku mid ah oo aan uga tagno midka innagu xiisaha badan maxaa yeelay laba jibbaaranaha ay deggen tahay darteed. U tag.
1 Difaaca munaaraddan oo kale ayaa noqotay mid moodo ah
2 Furo cutubyo cusub iyo kuwa sixirroolayaasha ah ee xoogga leh ee ku jira 33RD: Difaaca Random
3 Jilayaal badan iyo hub si loo furo
Difaaca munaaraddan oo kale ayaa noqotay mid moodo ah
Waxaan horey u soo marnay munaasabad samee laba dib u eegis laba kulan oo aad u badan la mid ah tan, inkasta oo halkan uguyaraan uguma muuqdaan nuqulo kaliya waxaanan leenahay qaybo kala duwan; inkasta oo ay wali tahay difaac munaarad ah oo leh shabakad 3 × 3 ah kaas oo cutubyada la dhigayo.
Xaaladdan oo kale, 33RD: Difaaca Random, waxaan leenahay xayawaanka iyo saaxiriinta in aan dhigi karno si aan kala sooc lahayn markii aan u riixno badhanka. Waxaan fursad u leenahay inaan dib u dejinno, in kasta oo aan ikhtiyaar u lahayn inaan gacanta ku qabanno, laakiin si kadis ah ayaan u aqaannaa illaa inta aan ka fahmayno in booska cusub ee la qaatay uu annaga na mudan yahay.
Hadda ka dib, mawjadaha cadawga ayaa bilaaban doona taas oo laga hortagi doono xayawaankaas mid walba astaamaheeda. Tusaale ahaan, gorgorradu waxay mas'uul ka yihiin gaabinta unugyada cadowga, halka diiqu ay awood u leeyihiin inay kordhiyaan dhaawaca ay u geystaan ​​isla cutubkan.
Furo cutubyo cusub iyo kuwa sixirroolayaasha ah ee xoogga leh ee ku jira 33RD: Difaaca Random
Sida aan awood u leenahay awoodi karaan inay ku midoobaan unugyada si ay awood dheeri ah uqaataan markay helayaan xiddig. Kuwani sidoo kale waa lagu midoobi karaa inay yeeshaan xoogaa xayawaanno xoog leh ama saaxirayaal ah iyo inaan sidoo kale ku horumarin karno maanada si tartiib tartiib ah oo joogto ah loo soo saaro.
Ujeeddada ciyaarta ayaa ah dili dhammaan wuxuushyada kahor inta wadarta 33 cutub laga dhalin. Si kale haddii loo dhigo, ma lahan meel ay ku dambeeyaan sida ku dhacda difaac badan oo munaarad ah, laakiin waa inaan isku daynaa inaanan gaarin tirada unugyadaas.
Dabcan waxaan wajaheynaa ciyaar freemium ah oo adeegsata xayeysiinta si ay u awoodaan inay soo saaraan abaalmarino badan dhamaadka heerka. Oo weliba waxaan kaloo haysannaa xulasho ciyaartoy badan, laakiin maxalliga ah si aan ugu raaxeysanno cayaaraha asxaab dhow.
Jilayaal badan iyo hub si loo furo
Wixii 33RD sidoo kale u taagan: Difaaca Random waxaa ugu wacan tiro badan oo dabeecado xayawaan ah iyo saaxirro ah oo ay tahay inaan furno, marka laga reebo taas noocyo kala duwan oo hub ah oo ciyaaruhu qaadan doonaan dhawaq kale. Marka la eego guud ahaan waa difaac munaarad ah in la tixgeliyo, in kasta oo ay raacayso waxa ku xusan bilahaan oo ah makaanigga noocan ah la guurinayo.
Muuqaal ahaan Waxay leedahay muuqaal aad u fiican iyo naqshadeynta saaxiriinta, xayawaanka, wuxuushyada iyo hubka waa quruxsan qabow. Ma jiraan wax gebi ahaanba taagan, laakiin waxay ku dareysaa waayo-aragnimada ciyaaraha si ay uga dhigto mid ku raaxeysanaya ku ciyaarista ciyaaro badan oo sidaas awgeedna si habboon ugu socota iyada oo wakhti fiican la qaadanayo.
33RD: Difaaca Random waa difaac kale oo munaarad ah iyada oo loox leh u imanaya Android doonaya in ay cago ku yeeshaan. Waxaad ku soo dejisan kartaa bilaash freemium-ka iyo xayeysiinta si horumariyaha uu u helo faa'iidooyinkiisa.
Aad ugu eg kuwa kale, laakiin uguyaraan uma muuqdo nuqul difaac oo munaarad ah oo sabuurad leh
Si fiican ayaa looga shaqeeyey guud ahaan
Naqshadda wuxuush, xayawaan iyo saaxiriin
La mid ah kuwa kale
33RD: Difaaca Random
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Abuur kooxdaada xayawaanka iyo saaxirrada 33RD: Difaaca Random
Sida loo mideeyo arji si loogu isticmaalo laba koonto oo ku yaal MIUI